U beddel Archlinux gal Antergos oo leh isla keydad | Laga soo bilaabo Linux
U beddel Archlinux gal Antergos oo leh isla keydad
Hagaag, dhab ahaantii qodobkaan ma ahan wax ku saabsan diinta Archlinux en Antergos gaar ahaan, laakiin in loo isticmaalo keydka gaarka ah ee dambe si loogu raaxeysto xirmooyinka qaar ee aan ku imaanin qaab ahaan Arch, iyo inaan rakibi karno dhibaato la'aan.
Antergos waa ArchLinux waxa LinuxMint u ah Ubuntu, ama ugu yaraan bilowgeeda. Si kale haddii loo dhigo, Antergos wuxuu adeegsadaa keydka ArchLinux oo wuxuu hayaa kaliya xirmooyin kooban oo kaabaya aragtidiisa ku aaddan sida ugu habboon ee wax loo qaybin karo u noqon karo. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Antergos waa in rakibiddiisu ay aad u fudud tahay, wax walbana aan ku sameyn karno qaab muuqaal ah.
Laakiin haddii aan horay u rakibnay Arch, qasab maahan inaan rakibno Antergos si aan ugu raaxeysano qaar ka mid ah barnaamijyadeeda ama waxyaabaha ay ka kooban tahay, in kasta oo gaar ahaan waxaan u maleynayaa inay marwalba fiican tahay in laga rakibo xoqida si wax walba ay u nadiif yihiin.
1 Waa maxay isticmaalka loo beddelayo Archlinux loona beddelo Antergos?
2 Sideen u qabanaa?
Waa maxay isticmaalka loo beddelayo Archlinux loona beddelo Antergos?
Hagaag iyo waxyaabo kale, waxaan ku yeelan karnaa mawduuc qurux badan LightDM kaas oo ahaa midka aan ugu jeclaa dhammaan maareeyayaasha kal-fadhi ee aan isku dayay.
Laakiin ma aha oo kaliya LightDM, u beddelashada Archlinux Antergos waxay na siin doontaa xirmooyinka soo socda:
Sideen u qabanaa?
Haa waan helay, aan u gudubno jahwareerka ku saabsan u-beddelashada Archlinux Antergos. Waxa aan sameyn doono waa nidaam fudud oo fudud.
Waxan oo dhan ku samee khatartaada. Waxaan ku tijaabiyay sifiican laakiin mid waliba waa adduun
$ sudo nano /etc/pacman.d/antergos-mirrorlist
Markii uu furo tifaftiraha qoraalka waxaan ku dhejineynaa gudaha:
Waxaan badbaadinaynaa. Hada sidee xidid waxaan fureynaa feylka /etc/pacman.conf oo waxaan raadineynaa xariiqda oraneysa:
[bulshada] Ku dar = /etc/pacman.d/mirrorlist
Halkan hoose ayaan waxaan dhigay:
[antergos] #SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/antergos-mirrorlist
Waanuna badbaadinaynaa. Hadda waa inaan ordi:
Oo waxaan horeyba u rakibi karnaa dhammaan xirmooyinka kor ku xusan. Ka fudud, aan macquul ahayn. Tani waa sida kumbuyuutarkeygu u eg yahay isticmaalka mawduuca numix-icon-theme-square-kde.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » U beddel Archlinux gal Antergos oo leh isla keydad
Daniel Guerrero dijo
Waxaan marwalba jeclaystay inaan rakibo antergos laakiin sabab layaableh awgeeda ayaan marna dhammeystirin soo dejinta wax walba oo lagama maarmaan ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan awooday inaan rakibo qaanso aan dhibaato lahayn sidaa darteed ma jiraan wax harsan oo aan sameeyo laakiin inaan arko sida ay u shaqeyso…
PS Aad ayaan u jecelahay sida desktop-kaaga u muuqdo, ma qaansooni baa mise waa hore? Farxad
Jawaab Daniel Guerrero
Si aad si sax ah ugu rakibtid baakadaha kaydintaas, waa inaad soo dejiso fure oo aad saxeexdaa keydka macluumaadka ee deegaanka
$ sudo pacman-key –recv-furayaasha 2A45C7B4
$ sudo pacman-key -lsign-key 2A45C7B4
Mmm funny, kiiskeyga waxaan sameeyay nuqul maxali ah oo ah bakhaarka Antergos waana awooday inaan rakibo aniga oo aan sameynin taas. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa in si sax ah khadka: #SigLevel = PackageRequired waa in laga fogaado taas. Laakiin waad ku mahadsan tahay caarada. 😉
Taasi waxay i xasuusineysaa markaan qabsado dib-u-celinta Ubuntu LTS.
Asal ahaan waxa kaga duwan Antergos ka Arch waa rakibaha garaafka iyo hal keydkaas, inta soo hartay waa isku mid. Waxay ka dhigeysaa noloshaada mid sahlan in la rakibo oo haddii aad jeceshahay muuqaalka caadiga ah ee Antergos uma baahnid inaad wax kale qabato.
Laakiin sidoo kale waa run in ficil ahaan dhammaan baakadaha la sheegay in lagu gaarayo iyada oo loo beddelo Antergos oo aad ku leedahay Arch iyada oo aan lagu darin kaydintaas, sida yaourt, mawduucyada, astaamaha, kordhinta gnome (oo sida iska cad aan lagu rakibin si caadi ah, laakiin waad ku rakibi kartaa iyaga oo gujinaya bogga si fudud), ilaha google, iwm.
arxan daran dijo
xitaa Thema lightdm waxay ku jirtaa AUR
Ku jawaab Brutico
Waayahay .. Oo ii sheeg waxa ka wanaagsan, ka soo ururi AUR ama horay u sii baakadka diyaar?
Marka loo eego dhadhanka, waxaa jiri doona dad doorbidaya inay ka soo ururiyaan AUR iyo kuwa kale ee doorbida inay ku sameeyaan guji badhanka.
Waxaan si fudud u doonayay inaan muujiyo in Antergos ay tahay Arch oo leh tas-hiilaad qaar, iyo in wax kasta oo ay Antergos ku siiso aad sidoo kale ku leedahay Arch, laakiin adigu naftaada ayaad u habeynaysaa.
Rikoor ahaan, waxaan ka qorayaa Antergos, aadna waan ugu faraxsanahay qeybintaan, ma aheyn dhaliil wax dumineysa 🙂
Waa hagaag taasi waa dhab ahaan waxa ay ku saabsan tahay, Antergos ayaa ah dookha ugu fiican ee kuwa doonaya ArchLinux qaab fudud 😀
Haa, gebi ahaanba raac. Waa Arch Linux horey ayaa loo qaabeeyey, haddii aad toos u rakibto Arch Linux, waxaad ku gaari kartaa nidaam isku mid ah Antergos.
Antegos malaha wuu fiicanyahay, laakiin ...
Ma jiraa qof leh dhibaato la mid ah aniga, oo aanan ku rakibi karin maxaa yeelay marka lagu kicinayo habka tooska ah nidaamku kuma xirna internetka?
Dhinaceyga wax kasta oo aan dhibaato lahayn, waxay isku xirtaa si dhammaystiran.
Tilmaam aad u wanaagsan Eli, oo ku daraya waqtigan xaadirka ah 'Antergos repo' ee gacaliyahayga Arch 🙂
Ku raaxayso! 😀
Waxaan isku dayaa inaan ku rakibo Antergos Intel core 2 Duo, oo leh 2 GB oo RAM ah, laakiin ma helayo inay ku shubto CD-ga tooska ah, anigoon fahmaynin sababta. Waan ogahay in CD-ga tooska ah uu ku jiro xaalad qumman. Sida muuqata anigu kaligay ma ahi qofka ay isla waxaas oo kale ku dhacaan. Arch waa mid aad u badan isaga. Ma jiraa qof og sababta?
Isla taas ayaa igu dhacda mana jirto wado aan xal ugu heli karo, haddii qof uu iftiimin yar bixin karo aad bay wax u taraysaa.
Dhibaato isku mid ah, kuma shubanayso qaab toos ah, waxaan ku dhammeeyay rakibidda sanduuqa manjaro oo ku daray gnome.
Valery Graciela dijo
Way igu dhacday aniga, laakiin waan ogahay inay sabab u tahay dhibaatooyinka Xorg. Waxaan isku dayay inaan saxo, laakiin ima ogolaanin. Marka waxaan u diray Antergos jahannamada, waxaanan la joogay Arch, markii hore wuxuu isiiyay dhibaatooyin isku xigxiga, laakiin qabsashada qaabkiisa waa raaxo
Jawaab Valery Graciela
Alexander ponce dijo
Miyaanay ka fiicnayn in la rakibo Antergos intii loo rogi lahaa "Arch" dhexdeeda, maxaa yeelay Antergos rakibidda distro iyo qaabaynteeda horay loo rakibay ayaa la fududeeyay, in kasta oo dabcan, ay aad u faa'iido badan tahay isticmaalayaasha bilaabaya inay isticmaalaan Arch , tusaale: sida haddii ka dib markii aan gaarigeena ku dhisnay waxyaabaha aan doorbidno (oo leh Arch), waxaan u dirnaa si aan u dhigno qaybaha harsan si ay u helaan adeegsiga saxda ah. Soo gal wanaagsan!
Jawaab Alejandro Ponce
Arch Linux… 100% la fahmi karo ilaa 2002.
Hadda ma joogo Arch (mar dambe ayaan isku dayi doonaa), laakiin waad geli kartaa repo, soo dejisan kartaa xirmada aad rabto, oo ku rakibo sudo pacman -U ?????????
Xog wanaagsan, Antergos waxay leedahay xirmooyin dhowr ah oo xiiso leh
dhagaxa ciida dijo
Wanaagsan waan isku dayi doonaa, waad maqleysaa waxaad sameyn kartaa casharro ku saabsan rakibida iyo socodsiinta apparmor ama selinux ee archlinux, waan jeclahay sida aad wax u sharaxdo, qeybteyda horey ayaan u baaray iskuna dayay siyaabo badan laakiin ma soo bixin, ma dhihi karo qalad ayaan sameynayaa . Hagaag, hadaad waqti iyo dhiirigelin uhesho, waxaan jeclaan lahaa inaad cashar ku saabsan taas aad la sameysid midkeenna
Ku jawaab arenita
Xirmooyinka kale ee loo yaqaan «zukitwo-themes» dheeraad ah more
Lagu dhejiyay dijo
Waxay la mid tahay haddii aan dhigno bakhaarrada Ubuntu Debian, ama meelaha loo yaqaan 'Mint' ee Ubuntu.
Dabcan waxaa jira baakado aad isula jaan qaadi kara, laakiin waxaa jira qaar si loo rakibo waxaad u baahan tahay inaad jabiso nidaamka.
Ku jawaab Metido
Maaha wax isku mid ah, Antergos waa Arch horeyba loogu qaabeeyey sida ay u dhadhamayso abuurayaasheeda, laakiin wali waa Arch, qaar badan ayaa sidaas ah markii aad rakibto waxaad lahaan doontaa isla cayayaanka aad ku leedahay Arch, ee igu dhacay aniga iyo Gnome. Sidoo kale, ha iloobin in Arch uu yahay nidaam yar oo qofkasta dhisi karo sida uu jecel yahay, Antergos waa Arch iyo keydkiisa ayaa si buuxda isula jaan qaadi kara.
Halkii. xiriirka Ubuntu iyo Debian waa mid aad u adag, waxay isticmaalaan keydad kala duwan waxyaabo kala duwan ayaa isbedela.
Mahadsanid elav, waad ku mahadsantahay hada waxaan haystaa Arch Liux oo leh Antergos repos si aan uhelo astaamaha Numix iyo dulucda GTK dhib la'aan any
Jawaab Sergio Durán
Ma jirtaa waddo lagu daro 'Antergos repo' Arch? Waan isku dayay laakiin qalad bay i siisaa:
khalad: fure «CDBD406AA1AA7A1D» meel fog lagama eegi karin
khalad: furaha loo baahan yahay kuma jiro keychain
qalad: hawlgalka lama qaban karin (qalad lama filaan ah)
Khaladaad ayaa dhacay, markaa xirmooyinka lama cusboonaysiin
Carlos A. Fraire dijo
Hagaag, wali ma aqrin wax faallooyin ah, laga yaabee in horey loo xaliyay laakiin waxaan ku darayaa inaan qalad helay ...
«Soo degsashada furayaasha loo baahan yahay ...
khalad: furaha loo baahan yahay kuma jiro baaldi
Khaladaad ayaa dhacay, markaa xirmooyinka lama cusbooneysiin »… google ayaan sameyn doonaa laakiin waxaan filayaa inaad xalka ku dari karto add salaan
Jawaab Carlos A. Fraire
Jonathan Duymovich Rojas dijo
Kuwa khaladaadka leh, waa inay wax ka beddelaan:
1 sudo nano /etc/pacman.conf
2 meel: (bulshada dhexdeeda aad bay uga fiicnaan lahayd in la dalbado):
SigLevel = Marna
Jawaab Jonathan Duymovich Rojas
Dhanka kale, kuma talinayo in lagu rakibo maareeyaha disaplay-ka (llightdm-webkit-greeter) nooca antergos maxaa yeelay qalad ayey yeelan doonaan markay galayaan gnome-ka la xiriira luqadda, waxaan kugula talinayaa inaad ka tagto dddm maareeyaha bandhigga weyn .. iyo kuwa Xitaa haddii ay dhibaatooyin ku qabaan luqadda Ingiriisiga iyo kiiboodhka Ingiriisiga, waa inaad raacdaa talaabooyinkan:
1. sudo pacman -S ibus dconf-tifaftire
2. furan tifaftiraha dconf; ka dib tag desktop-ka; markaa ibus; guud; oo hubi in: isticmaalka-nidaamka-kiiboodhka-qaabeynta iyo waliba si aad u hubiso in aad aadid nidaamka; deegaankaaga oo dhig meeshaada miinadu waa (es_ES.UTF-8)
3. dib u bilaw oo waxay ku qori karaan (qaabeynta- gobolka iyo luqadda) si habboon dhammaan luqaddooda u dhiganta kanaga iyo kiiboodhkaaga ..
Kaliya waxaan ku dhajiyay apricityos iyo archfr:
Eeg pacman.conf (5) manpage wixii ikhtiyaar u ah iyo dardaaranka kaydinta
Waddooyinka soo socda ayaa looga faalloodaa qiyamkooda asalka ah ee ku taxan.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho waddooyin kala duwan, ka naxo oo cusboonaysii waddooyinka.
#DBPath = / var / lib / pacman /
#CacheDir = / var / kayd / pacman / pkg /
#XferCommand = / usr / bin / curl -C - -f% u>% o
#XferCommand = / usr / bin / wget –passive-ftp -c -O% ama% u
#ShirtaMethod = KeepInstalled
Architecture = baabuur
Pacman ma casriyeyn doono xirmooyinka ku qoran IgnorePkg iyo xubnaha IgnoreGroup
#Qorshe Ma Jirto =
Ma hubin karno meel bannaan oo ka mid ah meelaha loo yaqaan 'chroot environment'
Sida caadiga ah, pacman wuxuu aqbalaa xirmooyinka ay ku saxiixeen furayaasha furaha maxalliga ah
aaminaadaha (eeg pacman-key iyo boggeeda man), iyo sidoo kale baakado aan la saxeexin.
SigLevel = Database loo Baahan Yahay Ikhtiyaar
LocalFileSigLevel = Ikhtiyaar
#RemoteFileSigLevel = Loo Baahan Yahay
FIIRO GAAR AH: Waa inaad oroddo pacman-key --init kahor intaadan isticmaalin pacman; deegaanka
keyring ka dib waxaa lagu buuxin karaa furayaasha dhammaan Arch Linux rasmiga ah
xirmooyin wata pacman-key --populate archlinux.
- waxaa lagu qeexi karaa halkan ama waxaa lagu dari karaa fayl kale
- pacman wuxuu raadin doonaa bakhaarrada sida ay u qeexeen halkan
- muraayadaha maxaliga ah / caadooyinka waxaa lagu dari karaa halkan ama faylal gooni ah
- keydadka ugu horreeya ee liistada ku qoran ayaa mudnaanta siin doona markay xirmooyinka yihiin
waxay leeyihiin magacyo isku mid ah, iyadoon loo eegin lambarka nooca
- URL-yada waxay yeelan doonaan $ repo oo lagu beddelay magaca repo-ka hadda jira
- URL-yada waxay yeelan doonaan $ arch oo lagu beddelay magaca dhismaha
Gelitaanka keydka ayaa qaab ah:
Server = Magaca Server
Ku dar = Ku dar dariiqada
Cinwaanka [repo-name] waa muhiim - waa inuu jiraa oo
aan la qoomameyn si loo awoodo repo.
Goobaha lagu baaro imtixaanku waa kuwo naafada ah. Si aad u awood u yeelatid, ka soo koob
magaca repo cinwaanka iyo Ku dar khadadka. Waad ku dari kartaa isla markiiba server-yada la door bidaa
ka dib cinwaanka, waxaana loo isticmaali doonaa ka hor muraayadaha caadiga ah.
Tusaale bakhaar xirmo qaas ah. Ka eeg manhajka pacman
talooyin ku saabsan abuurista bakhaarro kuu gaar ah.
SigLevel = Waa Loo Baahan Yahay
server = http://static.apricityos.com/apricity-core-signed/
# Kudar = /etc/pacman.d/mirrorlist
Ku dar = /etc/pacman.d/mirrorlist
SigLevel = Xidhmada Waa Loo Baahan Yahay
# [tijaabinta bulshada]
#SigLevel = Xidhmada Looga Baahan Yahay
Ku dar = /etc/pacman.d/antergos-mirrorlist
Ku jawaab anterosx
La Heli Karo Jabiyaha Asalka ah # 6